Olee otú Iji Plan A solo Travel Njem? | Save A Train
Home > Travel Europe > Olee otú Iji Plan A solo Travel Njem?
Solo njem na ya kacha mma bụ na-agwagbughị agwagbu n'imeju ọchịchọ onwe na spontaneity. Ọ bụ nnwere onwe na-abịa ma na-dị ka ị biko, nọrọ otu ebe ogologo na a whim, mafere saịtị azụmahịa; ma ọ bụrụ na ị na-apụghị esifịna. The naanị compromises mkpa ka ị na-onwe gị. N'etiti ọtụtụ ndị na-eto eto zuru ụwa ọnụ njem ọnọdụ, solo njem na-na-n'elu ntụpọ, ma na-akwa solo njem bịa nnukwu ọrụ. Ị maara ihe ha na-ekwu, e nwere uru na ọghọm ọ bụla ọnọdụ. Ọchịchọ gị na-aga ya naanị n'aka ị ga-abụ na-atụ-eche echiche na njikere. The Akon-akwụsị na ị na-. Mgbe ihe na-aga a obere ube-ekara, mkpa ka i nwere obi ike na savvy idozi ya. Ndị a bụ ụfọdụ ndụmọdụ kachasị mma anyị banyere Otu esi eme atụmatụ njem njem njem naanị.
Train Transport bụ Eco-Enyi na Enyi na kasị dịrị nchebe Way To Travel. nkena-isiokwu e dere na-akụziri banyere Train Travel site Save A Train, Ndị dị ọnụ ala Train Tickets weebụsaịtị Na The World.
Solo Travel Njem: Travel Site Train
Otu n'ime ndị kasị ewu ewu na ụdịdị nke njem solo njem bụ njem ụgbọ okporo ígwè. Ejegharị ụgbọ okporo ígwè ga-emepe a ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ebe na i nwere ike afanyekwa n'ime izu ole na ole. E nwekwara mmadụ mmewere, ọ bụ a oké ụzọ jikọọ na ibe adventurers na a mma gburugburu ebe obibi. Solo njem ụgbọ okporo ígwè bụkwa a oké ụzọ n'ezie-enwe ike ịhụ ebe na Okirikiri dị ka ị na-agafe ha. E nwekwara a akukọ ụgbọ okporo ígwè na-eduzi bụ ndị zuru okè na-ajụ banyere ụgbọ okporo ígwè foto, agbalị ya maka gị ọzọ zuru okè Instagram akụkọ.
Ịhọrọ A Destination & ntinye akwụkwọ Ulo
Mgbe ị na-ahọrọ a ebe maka gị solo aga – elele anya-oge, nke nwere ike inyere gbatịa gị ego a obere n'ihu. The njem bụ nke gị ma otú bụ ndị na-eri. Inwe na n'uche, ịlele ihu igwe! Ụfọdụ ebe n'oge anya-oge bụ nanị horrid na ọ ga-abụ a ezi echiche-uche na isi ihe ma ọ bụ ememe na ike izipu ahịa skyrocketing. E nwere ọtụtụ ihe nke ulo, n'ebe ọ bụla ị na-ekpebi njem, hotels, B&B si, na Airbnb si juru. Buru onye na-adabara gị na na gị ego.
Solo Travel Njem: Ịchụ Your njegasi
Spontaneity bụ onye nke kasị mma elele nke solo njem ma, na-amalite, agbalị na-nwere a akowaputara njegasi. Ọ bụ ihe magburu onwe ya amalite. Chọpụta isi Isi nke ebe ị họọrọ na melite a timeline. Mma nke na-enwe a akowaputara njegasi bụ na ọ pụrụ eduzi gị mgbe n'otu oge ekwe ka ị na-agbanwe ka ị na-aga.
Safety mbụ dịtụbeghị apter. Ọ bụrụ na ị na-ejegharị ejegharị ebe ọhụrụ na unchartered maka ị, iburu n'uche nke obodo mpụ na-ekpo ọkụ tụrụ na-eme gị research! Mgbe ị na-esi na banyere, -gị na ọnụ nke larịị n'anya ma na-agbalị bụghị na-eje ije gburugburu na-achọ ala ekwentị gị. Ebu gị hotel aha na adres gị, adịghị ama ama. Gbalịa na mara nke ọma na ụfọdụ noÚmba eyighịÚ eyi na mgbe ị na-nnyocha nchekwa maka gị akpan akpan ebe, ime a obere nnyocha na omenala oru nakwa. Onye nke kasị mma nchebe anya na-ekere òkè gị njegasi na a enyi ma ọ bụ onye ezinụlọ. Ka ndị mmadụ ịma ebe ị nọ na ihe atụmatụ gị na-. Melite ha na ihe ọ bụla mgbanwe ị na-eme ka n'ụzọ.
Solo Travel Njem: Anam Friends Yana The Way
Mgbe solo njem dị ukwuu, ị nwere ike ịga n'ihi na ụbọchị na-enweghị na-ekwu okwu ka onye. Udo pụrụ ịbụ otu n'ime ihe ndị mere na ị na-ejegharị ejegharị solo ma ọ pụrụ imesị buru ya ọnụ ọgụgụ. Luckily, mgbe ị na-na-aga n'ihu, ọ bụ nnọọ mfe izute ọhụrụ ndị mmadụ ma malite a ole na ole mkparịta ụka. inwe obi ike. Nọgidenụ na-na ntị oghe maka a maara olu okwu ka gị onwe gị na-echeta na-akọrọ ahụmahụ na-a zuru okè ice-emebi jikọọ na ndị njem ibe.
Mgbe ị na-solo njem, gị mkpa iji jide n'aka na i nwere ike na-ebu ihe niile na gị onwe gị. Otu obubu-on, akpati, ma ọ bụ a azu paaki kwesịrị ịbụ ego zuru oke ma ị na-eme njem otu izu ma ọ bụ atọ. Mkpọ maka ebe, eji ejiji maka weather, nke kwesịrị mee gị ibu. Ị ga-ahụ otú ezi ọ na-ele abịa naanị ndị dị mkpa na-ahapụ tụkọtara n'azụ. Gị igwefoto bụ mgbe a mkpa, solo njem na foto a na-agakọ.
Solo Travel Njem: Nri abalị N'ihi One
Ọ bụrụ na ị na-obi gaa alaka n'ime solo njem, ị na-obi iri naanị. N'ọtụtụ mba, nri ụtụtụ na nri ehihie na-aka enwe na ukporo n'akụkụ ya ma ọ bụrụ na ị na-atụ egwu na table maka otu dịruru ná njọ, na-amalite na a nri ugboro. Were a n'akwụkwọ ma ọ bụ a na magazin na gị na ọ bụrụ na-eri nri naanị n'ezie abụghị gị ihe, anya n'ime obodo meetup iche iche. Ị nwere ike ijikọ na ndị na-revel na foodie mkpapụ na ọ bụrụ na ị chọrọ n'ezie chọrọ iji zere ìgwè mmadụ, anya n'ihi na ulo na awade a ụlọ ekwu na-esi nri ruo gị onwe gị na oké ifufe.
Gbalịa rutere Na The Day
Mgbe ị na-eme atụmatụ gị njegasi, agbalị plan-abata n'oge ìhè awa. Ọ bụ nnọọ a na-akụda ọrụ iji chọta ụzọ gị site na ị na-amaghị obodo na ọchịchịrị na ihe ndị ọzọ mere mgbe ị na-eme ya solo. Planning ga-abụ ihe mgbagwoju anya akụkụ nke gị solo njem ozi, na-amalite, na i nwere ike a na-enwekarị ka ị na-akpali tinyere ma a obere nkọwa ka a ezigbo ihe dị iche.
Ị na-eme nhọrọ ziri ezi na-eme ụfọdụ na-ejegharị ejegharị na gị onwe gị na-enwe a solo Njem. Ị ga-nnọọ nghọta na-emeghe ka ihe na-eme gburugburu gị. Always atụkwasị obi gị gootu mmuo mgbe ejegharị ejegharị na ojiji Save A Train!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “Olee otú Iji Plan A solo Travel Njem?” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsolo-travel-trip%2F%3Flang%3Dig የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / de na / tr ma ọ bụ / es na ndị ọzọ asụsụ.